Nolosha Finland > Caafimaadka > Dhalmada
Dalka Finland dumarku waxay ku umulaan isbitaalka caadiga ah. Ruqta hooyada iyo dhalaanka ayaad ka heleysaa macluumaadka la xiriira isbitaalka ama isbitaalada aagaa aad degantahay ku yaal. Haddii aad Degan Degmo ku yaalo Finland, daryeelka isbitaalku adiga waa kuu jabnaanayaa.
Waxaa kale oo macquul ah guri ku umulida, laakiin kama mid ahan xayndaabka guud ee daryeelka caafimaadka, cidna lagulama talinaayo. Taas macnaheedu waa in waalidku ay iyagu sameeyaan qaban-qaabada umulista. Sidoo kale mas’uuliyada habsami u socodka umulida waxaa iska leh waalidiinta.
Sida badan aabuhu wuxuu ka qayb qaataa umulida hooyada. Caawiye waxaa kaloo noqon kara qof qaraabo ama saaxiib ah. Haddii aad dooneysid waxaad kaloo waqtiga umulida codsan kartaa qof dumar ah oo taakuleeyso ah oo iskeed kuu taakuleynaysa soona qaadatay tababarka caawiyenimo ku shaqaynta. Qofkaas oo kale waxaa loogu yeeraa doula. Waxaad weydiin kartaa rugta hooyada iyo dhalaanka ee goobta aad degen tahay hawlaha wixii ku saabsan caawisada ama doulada
Dalka Finland hooyoyinka intooda badan waxay ka dhalaan hoosta, sida badan waa habka ugu nabadgalyo badan. Sidaan haddii aysan suurtogal ahayn qaabka ilmuhu caloosha ugu jiro awgeed, dhakhtar ayaa go’aan ka gaaraya qaliinka. Haddii sida kale ay wax walba caadi yihiin qaliinka horay ayaan u sii qorsheyn karnaa. Mar marka qaar dhalmadu si caadi ah ayey u bilaabataa, laakiin badqabka ilmaha awgeed waa in la sameeyo qaliin deg deg ah.
Haddii aad dhalmada ka baqaysid, arinta kala hadal kaaliyaha caafimaad ama takhtarka joogo rugta hooyada iyo dhalaanka. Cabsida waxaa kaalmo looga heli karaa oo kaa kalmeyn kara, tusaale ahaan poliklinikada cabsida dhalmada (synnytyspelkopoliklinikka).
Rugaha la-talinta hooyanimada iyo cusbitaalada qaarkood waxaa lagu qabanqaabiyaa carbin qoys, taas oo ujeedada laga leeyahay ay tahay u diyaarinta ama carbinta hooyada iyo qoyska dhalmada soo socota iyo daryeelka dhallaanka dartood. Carbinta qoyska waxaad sidoo kale ka heleysaa macluumaadka la xiriira sida ay dhalmadu u bilaabanayso iyo waqtiga ay tahay inaad isbitaalka aado. Haddii biyaha ilmuhu dilaacaan ama uu qabto xanuun is dabajoog ah oo isku dhaw dhaw iyo maroojin xanuun badan, wac isbitaalka, weydiina inay tahay waqtigii aad isbitaalka aadi lahayd.
Markii aad isbitaalka aadeysid, ilmaha u sii qaad dhar diirimaad ku filan leh, oo loo soo geliyo marka guriga loo soo noqonayo. Haddii aad rabtid inaad ilmaha gaari ku soo qaado marka aad isbitaalka ka soo baxaysaan, waxaa u baahan tahay kursiga gaariga ee caruurta lagu fariisiyo (turvakaukalo).
Turjumaada waqtiga dhalmada
Waa adag tahay in turjubaan la helo waqtiga dhalmada, sababtoo ah waqtiga sugan ee dhalmada way adag tahay in horay loo sii ogaado. Xarumaha turjumaanada qaarkood waxay heega yihiin dhamaadka usbuuca iyo galabtii iyo habeenkii iyo sidoo kale waqti gaaban gudohood ayaa ku diyaar garoobi karaan haddii loo baahdo. Rugta hooyada iyo dhalaanka ayaad ka heleysaa macluumaadka dheeriga ah ee la xiriira adeegyada turjumaada ee degmadaada. Waxaad kaloo shaqaalaha kala heshiin kartaa in lamaanahaaga ama saaxiibkaaga luuqada yaqaan inay dhalmada kuugu soo raacaan turjumaan ahaan. Turjubaan isticmaalida waxaa go’aan ka gaaraya waalidiinta. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Turjubaan ma u baahan tahay?
Gudniinka iyo dhalmada
Haddii lagu guday (ympärileikkaus) ka hor intii aaadan Finland imaan, oo aad qorshayneysid inaad uur yeelato, waxaa lagugu sameyn karaa qaliin furitaan gudniin ah (avausleikkaus). Qaliinka waxaa la samayn karaa inta uurku uu dhexda marayo. Waxaa wanaagsan inaad gudniinka horay ugu sii sheegto isbitaalka dhalmada, si tixgelin loogu siiyo waqtiga dhalmada.
Hagaha la magacbaay Ilmo yar baa noodhalanaya(pdf, 1,46 Mt)Finnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Soomaali
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 15.12.2014 Boggan war-celin ka soo dir